Leli Phasika linenselelo entsha kumaKrestu - Ilanga News
Home Izindaba Leli Phasika linenselelo entsha kumaKrestu
Leli Phasika linenselelo entsha kumaKrestu
ISIKHATHI somkhosi wePhasika sithathwa njengesimqoka kakhulu ebandleni lamaKrestu, kwazise asuke ekhumbula uthando lukaNkulunkulu owanikela ngeNdodana yaKhe ukuba izofela izono zethu emhlabeni.
Lo mkhosi, osekwajwayeleka ukuba uhlanganise ndawonye izinkumbi zamakholwa ngokwehlukana, ukukhumbula ukufa kukaJesu Krestu ezindaweni ezahlukene, nonyaka uzobungazwa ngendlela ehluke kakhulu okokuqala ngqa kuleli khulunyaka.
Phela ufike esikhathini esinzima emhlabeni njengoba izizwe ngezizwe zihleli lubhojozi ngenxa yokusabalala okomlilo wequbula komkhuhlane oyingozi, iCovid-19.
Lo mkhuhlane sewubulale izinkulungwane emhlabeni kanti abantu osubahaqile sebeqile ku-1 million umhlaba wonke, futhi uyaqhubeka nokusabalala ngamandla.
Lokhu sekuphoqe amazwe amaningi ukuvala thaqa ukusebenza kwezinhlaka eziningi, kwasala ezithathwa njengezimqoka kuphela ikakhulukazi umkhakha weze-mpilo nowezokudla, ukugwema ukusabalala ngamandla kwalo mbulalazwe oqubuke nyakenye eChina.
Kulindeleke ukuba amaKrestu asebenzise lesi sikhathi ukuthandaza ngokujulile ngawodwana, esemagunjini awo, ukuzama ukusondelana noNkulunkulu, acele uxolo lapho umhlaba uphambuke khona, ukuze kutholakale ikhambi elizosiza kuphile abantu abaningi.
Empeleni nalo iBhayibheli liyakucacisa ezingxenyeni zalo ezahlukene ukuthi nxa sekwehluleke konke, umuntu kusuke sekufanele ukuba anyukele entabeni, ayokhuluma noNkulunkulu wakhe. Intaba ngokweNcwadi eNgcwele yindawo lapho ukwazi ukuzikhalela khona kuNkulunkulu uwedwa, ngaphandle kokuphazanyiswa ngabathile.
Lokhu-ke kakuyona into entsha ezindlebeni zama-Krestu, kwazise naye uqobo uJesu, kunesikhathi lapho abashiya khona abafundi bakhe, wayokhuleka yedwa entabeni yaseGetsemane, wabuya sebelele.
Lokhu kwenzeka ngaphambi kokuba aficwe yisikhathi esinzima sokuhlushwa, abulawe.
Okuyinkomba yokuthi wayesenomuzwa noma isiphrofetho sokuthi kunesikhathi esinzima esizayo, ngakho udinga ukuxhumana ngokujulile noYise, uNkulunkulu. Sinxusa wonke amakholwa kuzona zonke izinkalo ukuba athobele umyalelo kaMengameli Cyril Ramaphosa wokugonqa lezi zinsuku eziwu-21 ukuzama ukuvimba ukusabalala kwalesi sifo, akhuleke ngawodwana ngokuzinikela kuNkulunkulu.
Sekwaba yinto ejwayelekile kuleli ukuba nezigameko ezinyantisa igazi zokubhubha kwamakholwa nxa ehambele izinkonzo ezinkulu zePhasika njengoba nanyakenye kukhona awelwa wudonga lwendawo ayekhonzela kuyona ashona eMpangeni, okuyinto ebuhlungu.
Mhlawumbe nonyaka uNkulunkulu uqhamuke neqhi-nga lokuba wonke umuntu ajule esendaweni yakhe kuleli Phasika, engezophazanyiswa wukubuka ukuthi osuduze kwakhe ugqokeni, unuka amakha amnandi kanjani, nokunye, kodwa ezogxila ngqo ekukhulumeni noMdali ngaphandle kokususa umqondo wakhe ekukhulekeni.
Previous articleICorona izoba nomthelela omubi emnothweni wakuleli
Next articleUNkulunkulu ulindele sidumise singaphezi